Iyo kamera yeiyo iPhone 6s (12MP) yakaenzana neiyo Xperia Z5 (23MP) | IPhone nhau
Kusvika ikozvino tinogona kufunga kuti kamera yakapihwa neXperia Z5 ndiyo yakanakisa kamera inowanikwa mu smartphone, asi zvinoita sekunge izvo zviri kuchinja. Mushure mekuitisa yakateedzana bvunzo mune chaiwo mamiriro, iyo 23 MP kamera yeiyo Sony Xperia Z5 yakapfuurwa ne12 MP kamera yeiyo iPhone 6s. Sony's flagship kamera ichine zvayakanakira, seyakakura kamera iri, semuenzaniso, zvinotora zvirinani selfies mune yakanaka mwenje mamiriro uye mamwe mavara anoratidzika kunge akajeka. Nekudaro, zvinoda kuziva kuti avo vanoburitsa nemufaro mukuru mamwe makamera ekugadzirisa kukuru, vanodarika imwe mushure memumwe nemakamera ane hafu yemamegapixels asi zvakapetwa kaviri kumashure. Simba risina kudzora haribatsiri.
Mukutaura kamera yeiyo iPhone 6s inoratidza yakajeka mifananidzo, akajeka mavara, zvisinei mamwe megapixels eiyo Xperia z5 kamera anotibvumidza isu kukudza mifananidzo kuwana tsanangudzo yakakura mune icho chinhu.
Mavhidhiyo ese ari maviri ane zvayakanakira nezvayakaipira, asi bvunzo iyi inojekesa kuti zvisinei kuti chii chatinotenga mune ese mamiriro, pane ese majaira isu tichawana mifananidzo inoshamisa nemavhidhiyo. Hapana foni yaigona kutorwa seyakaipa mukuenzanisa, saka iwo sarudzo dzakanaka. Zvingave zvinonakidza kuona kuti nyika yemakamera inofambira mberi sei munhare nekuda kwekuti iyo megapixel hondo yatove nhoroondo, mhando iyi yekufananidza inovimbisa kuti mamwe megapixels haareve mifananidzo iri nani, uye kuti makambani mazhinji anosarudza kuisa izvi zvakakura huwandu hwakaenzana nechinangwa chekushambadzira chete.
Naizvozvo, zvakare zvakare, isu hatifanire kunyengerwa nemazita ezvinzvimbo, nhamba, huwandu hwemakore uye zvigadzirwa, tichitarisa zvakanyanya mukuita kwezvigadzirwa, uye zvimwe pazera rekutaurirana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo kamera yeiyo iPhone 6s (12MP) inoenderana neyeiyo Xperia Z5 (23MP)
Sezvo zvichikwanisika kuti hapana chimwe chinhu kunze kwekutaura pamusoro pekuti iphone yakanaka sei uye hautaure nezvenyaya dzinosemesa dzechipgate, unofanirwa kuve nechinangwa chakati wandei.
CHIPGATE. Hahaha !!!!! Chii chauri geek iwe uri, amai vaMwari.
Wangu wandaishanda naye Pablo haana kunyora imwe, asi zvinyorwa zviviri pa chipgate, inova imwe njodzi kubva kuSamsung, ndicho chikonzero nei Apple ichisiya Samsung machipisi egore rinotevera. Kwazisai uye nekutenda nekuverenga kwedu.
Inodaidzwa kutsiva Miguel, tsvaga vanopa RAM ndangariro nekuti izvo zvinoenderera, zvese zvekuungudza kuti zvinoenderana nezvavakateedzera, pavanobirira kubva ku htc uye hapana munhu anoti chero chinhu, zuva iro apuro rinomira kuburitsa pasita asi kunyangwe imbwa inozoita tsvina.
Zvakanaka ndinofanira kutaura kuti mumifananidzo zvakakosha, asi muvhidhiyo, iPhone inopa chiuru kurova kunyanya mukudzikama kwemufananidzo. Zvimwe izvo kana kupisa kweZ5 kunotyisa hahahaha
CHIPGATE ?? JUAJUAJUAJUAUJAJUAJUAJJAU
Anti Mabasa akadaro
Ndeipi kamera iri nani? Iyo ihama kwazvo.
Kana semushandisi iwe uchitsvaga poindi uye kupfura sarudzo, iyo iPhone iri pasina mubvunzo iri nani. Kana, kune rumwe rutivi, iwe uchitsvaga rusununguko rwekugadzirisa CHIMWE paramende (icho chiri pachena chinoda imwe nhanho yeruzivo) iyo Z5 ndiyo ichave inokunda.
Pindura kune Anti Mabasa
Chinhu chega chinodarika iyo Sony chiri mune yemhando odhiyo kana uchirekodha vhidhiyo uye mune autofocus ... Mune zvimwe zvese, iyo iPhone inodarika iyo !!! Mumwe apfuura iyo hardware kugadzikana mune iyo Plus !!!
Iwe unoona, muna Zvita, Santa Claus, ndinoziva zvaachandivigira, kuvandudza 5S ne6S, hehehehe.
Ndine sony xperia z5 asi yaisakwanisa kuona ndangariro yayo yemukati ye30 gb, uye pandinoona sarudzo mukamera chete h uye kusvika 12mp ... chii chandingaite? pane munhu angandibatsira…
Adobe Lightroom yeIOS ikozvino yakasununguka zvachose